ဒိုင္ယာေလာ့ခ္ မ်ားေရးသားရာတြင္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ား - Myanmar Network
Posted by Language Republic on December 4, 2014 at 11:03 in အဂၤလိပ္စာ သိေကာင္းစရာ အျဖာျဖာ
႐ိုးရွင္းသည့္သဒၵါစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလိုက္နာသင့္သည္။ အေျပာစကားကို quotation အမွတ္အသားမ်ား ထဲတြင္ထားသင့္သည္။ dialogue ၏ ၀ါက်အသစ္မ်ားတိုင္းသည္ မာဂ်င္မွခြာကာ အတြင္းသို႔၀င္ေအာင္ indent လုပ္ထားသင့္သည္။ ေနာက္တစ္ေယာက္ျပန္ေျပာတိုင္း စာပိုဒ္အသစ္စသင့္သည္။
အခ်ီအခ်ေျပာစကားသည္ လိုတိုရွင္းျဖစ္သင့္သည္။ စကားၾကြယ္သည့္စာေၾကာင္းရွည္မ်ားသည္ ေျပာခ်င္တာကိုေရာက္ေအာင္ပို႔ႏိုင္သည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း စာဖတ္သူအတြက္ ျငီးေငြ႕ဖြယ္ျဖစ္သည္။
ဇာတ္ေကာင္စ႐ိုက္ကို ထင္ဟပ္သင့္သည္။ စကားေျပာခန္းေကာင္းတစ္ခုသည္ ဖတ္လိုက္သည္ႏွင့္ ေျပာသူ၏ စ႐ိုက္ကို စာဖတ္သူမွ သိႏိုင္သည္။
ဇာတ္ေၾကာင္းအလိုက္ ခြဲျခားသင့္သည္။ လူတို႔က စကားေျပာလွ်င္မရပ္ေတာ့။ ဂနာမၿငိမ္။ ေရွ႕တိုးကာတိုးကာေျပာေတာ့သည္။ ဇာတ္ေကာင္မ်ားသည္ သက္ၿငိမ္မ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း သတိထားပါ။
စကားေျပာခန္း ေနာက္ဆက္ေလးမ်ားႏွင့္သိပ္အဆန္းမထြင္ပါႏွင့္။ “he saids” သို႔မဟုတ္ “she replied” တို႔အား ေနရာတက်ထားႏိုင္လွ်င္ အလုပ္ျဖစ္ပါသည္။ စကားေျပာခန္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ သာေရးထားပါက tags မပါဘဲႏွင့္ မည္သူေျပာေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။
ေနာက္ခံဇာတ္လမ္းေတြႏွင့္ အလြန္အက်ဴးမေျပာပါႏွင့္။ ဇာတ္ေကာင္သိထားၿပီးသား အေၾကာင္းအရာေတြအား စာဖတ္သူကိုေျပာဖို႔ စကားေျပာခန္းကိုဘယ္ေတာ့မွမသံုးသင့္ပါ။
စကားေျပာခန္းမ်ားအလြန္အက်ဴး မသံုးပါႏွင့္။ ဇာတ္ေကာင္ေျပာသမွ် တစ္လံုးခ်င္း ကို စာဖတ္သူ သိစရာ မလိုပါ။ သတိထားေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
သိပ္သဘာ၀က်ေအာင္မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ လက္ေတြ႕အေျပာစကားသည္ ေကာင္းသည့္ စကားေျပာခန္းတစ္ခုေတာ့ျဖစ္မလာတတ္ပါ။ လက္ေတြ႕အေျပာတြင္ “um” ႏွင့္ “uh” တို႔ကို အလြန္သံုးၾကပါသည္။ ၀ါက်မ်ားၾကားတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသံတိမ္သြားတတ္သည္။ အေၾကာင္းအရာကို ႀကိဳတင္အခ်က္မျပဘဲ ေျပာင္းတတ္သည္။ စကားေျပာခန္းေကာင္းတစ္ခု သည္ သဘာ၀ႏွင့္ နီးစပ္သင့္ေသာ္လည္း သဘာ၀အတိုင္းေတာ့ တုပထားျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါ။
စာဖတ္ပါ။ မိတ္ေဆြအႀကိဳက္ဆံုးစာေရးဆရာမ်ား ေရးသည္ကို ေလ့လာပါ။ သူတို႔ လုပ္ေလ့လုပ္ထ မရွိသည္မ်ားကို မွတ္သားပါ။
နားေထာင္ပါ။ သဘာ၀စကားေျပာ မည္သို႔ေလသံေပါက္သည္ကို အေလးထားပါ။ ထိုသဘာ၀ ဂီတသံကို မိမိအေရးအသားတြင္ ထည့္သံုးျဖစ္ေအာင္သံုးပါ။
အသံထြက္ဖတ္ပါ။ မိမိ၏စကားေျပာခန္းကို မိမိကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း အသံထြက္ဖတ္ျပပါ။
ကောင်းမွန်သည့် အချီအချစကားပြော ဆိုသည်မှာ ပညာသားပါတတ်သည်။ ဇာတ်လမ်းကိုရှေ့တန်းတင်ကာ ဇာတ်ကောင်းစရိုက်ကို ဟန်ဆောင်မှုမပေါက်အောင် သရုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်သည်။ သဘာဝတကယ်မကျဘဲနှင့် သဘာဝကျပုံပေါ်စေရသည်။
ရှုပ်သွားသလား။ ရှင်းပါမည်။ စကားပြောကောင်းတစ်ခုပြုသင့်သည့် အချက်များ အောက်တွင်ကြည့်ပါ။
ရိုးရှင်းသည့်သဒ္ဒါစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာသင့်သည်။ အပြောစကားကို quotation အမှတ်အသားများ ထဲတွင်ထားသင့်သည်။ dialogue ၏ ၀ါကျအသစ်များတိုင်းသည် မာဂျင်မှခွာကာ အတွင်းသို့ဝင်အောင် indent လုပ်ထားသင့်သည်။ နောက်တစ်ယောက်ပြန်ပြောတိုင်း စာပိုဒ်အသစ်စသင့်သည်။
အချီအချပြောစကားသည် လိုတိုရှင်းဖြစ်သင့်သည်။ စကားကြွယ်သည့်စာကြောင်းရှည်များသည် ပြောချင်တာကိုရောက်အောင်ပို့နိုင်သည်ဟု ထင်ရသော်လည်း စာဖတ်သူအတွက် ငြီးငွေ့ဖွယ်ဖြစ်သည်။
ဇာတ်ကောင်စရိုက်ကို ထင်ဟပ်သင့်သည်။ စကားပြောခန်းကောင်းတစ်ခုသည် ဖတ်လိုက်သည်နှင့် ပြောသူ၏ စရိုက်ကို စာဖတ်သူမှ သိနိုင်သည်။
ဇာတ်ကြောင်းအလိုက် ခွဲခြားသင့်သည်။ လူတို့က စကားပြောလျှင်မရပ်တော့။ ဂနာမငြိမ်။ ရှေ့တိုးကာတိုးကာပြောတော့သည်။ ဇာတ်ကောင်များသည် သက်ငြိမ်များမဟုတ်ကြောင်း သတိထားပါ။
အောက်တွင်ကား စကားပြောခန်း ရှောင်ရန် တစ်ချို့ဖြစ်သည်။
စကားပြောခန်း နောက်ဆက်လေးများနှင့်သိပ်အဆန်းမထွင်ပါနှင့်။ “he saids” သို့မဟုတ် “she replied” တို့အား နေရာတကျထားနိုင်လျှင် အလုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စကားပြောခန်းကို သေသေချာချာ သာရေးထားပါက tags မပါဘဲနှင့် မည်သူပြောကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။
နောက်ခံဇာတ်လမ်းတွေနှင့် အလွန်အကျူးမပြောပါနှင့်။ ဇာတ်ကောင်သိထားပြီးသား အကြောင်းအရာတွေအား စာဖတ်သူကိုပြောဖို့ စကားပြောခန်းကိုဘယ်တော့မှမသုံးသင့်ပါ။
စကားပြောခန်းများအလွန်အကျူး မသုံးပါနှင့်။ ဇာတ်ကောင်ပြောသမျှ တစ်လုံးချင်း ကို စာဖတ်သူ သိစရာ မလိုပါ။ သတိထားရွေးချယ်သင့်သည်။
သိပ်သဘာဝကျအောင်မကြိုးစားပါနှင့်။ လက်တွေ့အပြောစကားသည် ကောင်းသည့် စကားပြောခန်းတစ်ခုတော့ဖြစ်မလာတတ်ပါ။ လက်တွေ့အပြောတွင် “um” နှင့် “uh” တို့ကို အလွန်သုံးကြပါသည်။ ၀ါကျများကြားတွင် ကျွန်တော်တို့ အသံတိမ်သွားတတ်သည်။ အကြောင်းအရာကို ကြိုတင်အချက်မပြဘဲ ပြောင်းတတ်သည်။ စကားပြောခန်းကောင်းတစ်ခု သည် သဘာဝနှင့် နီးစပ်သင့်သော်လည်း သဘာဝအတိုင်းတော့ တုပထားခြင်းမျိုး မဖြစ်သင့်ပါ။
Dialogue တစ်ခုမည်သို့ဖြစ်သင့်သည်ကို နမူနာပြရန် မိမိရေးထားသော “Me” ခေါင်းစဉ်ရသည့် ၀တ္ထုတို တစ်ခု၏ အဖွင့် တစ်ခုအား ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
“What do we do now?” ကဲကျုပ်တို့အခုဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ။
တစ်ခုတည်းသော ဖယောင်းတိုင်၏ ဟက်သာ့ မျက်နှာထက်တွင် တစ်ဖျတ်ဖျတ်ယိမ်းနွဲ့နေသည်။ မြေအောက်ခန်း၏အနံ့အသက်ကား ပန်းသီးစိမ်းရနံ့တို့ဖြင့်လွှမ်းခြုံထားလျက်။ ကျွန်တော့်ထံ သူမအကြည့်တစ်ချက် ၀င့်လိုက်သည်။
“Nothing, Kristy. Just wait.” ဘာမှမလုပ်ဘူး ခရစ္စတီ။ စောင့်ယုံပဲ။
ကျွန်တော် သက်မချမိသည်။ စောင့်ရတာကို မုန်းလိုက်တာ။ ကျွန်တော့် လက်မောင်း၊ တင်ပါး တို့ ထူပူလာစပြုပြီ။ ပလပ်စတစ်ဒိုင်ခွက်လေးပေါ် စိတ်မရှည်စွာ လက်ချောင်းလေးများဖြင့် ခေါက်မိသည်။
“Stop it,” Heather hissed. “You’ll make them mad.” “ရပ်စမ်း” ဟက်သာက လေသံနှင့်ပြောသည်။ “ရှင် သူတို့ကို စိတ်တိုအောင်လုပ်သလိုပဲ”
“Make who mad?” “ဘယ်သူ့ကို စိတ်တိုအောင် လုပ်ရမှာလဲ”
“The spirits, stupid.” “နာနာဘာဝတွေလေ အရူးရဲ့”
ဟုတ်ပါသည်။ နာနာဘာဝ။ နာနာဘာဝတွေက ပါကားညီအကို ကတ်ထူပြားပေါ် ကျွန်တော်တို့နှင့်အဆက်အသွယ်လုပ်စကားပြောတော့မည်ကို ယုံကြည်သလိုမျိုးပေါ့။
အထက်ပါ ခရစ္စတီနှင့် ဟက်သာတို့၏ အချီအချ စကားပြောခန်းမှ သူတို့၏စိတ်နေစရိုက်နှင့် ခံစားမှု ကို ကျွန်တော်တို့တစ်စုံတစ်ရာခံစားရပါသည်။ အဆိုပါ အဖွင့်ခန်းအတိုလေးမှပင် သူတို့အကြောင်း တစ်စုံတစ်ရာသိလိုက်ရသည်။
ဤသို့ဆိုလျှင် မိတ်ဆွေ၏ စကားပြောခန်းကို ပိုကောင်းအောင် မည်သို့ ပြုပြင်နိုင်မည်လဲ။
စာဖတ်ပါ။ မိတ်ဆွေအကြိုက်ဆုံးစာရေးဆရာများ ရေးသည်ကို လေ့လာပါ။ သူတို့ လုပ်လေ့လုပ်ထ မရှိသည်များကို မှတ်သားပါ။
နားထောင်ပါ။ သဘာဝစကားပြော မည်သို့လေသံပေါက်သည်ကို အလေးထားပါ။ ထိုသဘာဝ ဂီတသံကို မိမိအရေးအသားတွင် ထည့်သုံးဖြစ်အောင်သုံးပါ။
အသံထွက်ဖတ်ပါ။ မိမိ၏စကားပြောခန်းကို မိမိကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုသော်လည်းကောင်း အသံထွက်ဖတ်ပြပါ။
ပညာရှင်တစ်ယောက်လို စကားပြောခန်းများ ရေးလို့ရေးနိုင်မှန်းမသိ တိုးတက်လာပါလိမ့်မည်။
http://www.dailywritingtips.com/ မှ Erin ၏ Dialogue Dos and Don’ts ကို မှီးငြမ်းရေးသားထားပါသည်။
Permalink Reply by thinkhaingsoe on December 5, 2014 at 8:31
Permalink Reply by Myo Myint Kyaw on December 5, 2014 at 23:09